Date My Pet » 5 Fomba Hahitana ny fitiavana ny Fiainanao!
5 Fomba Hahitana ny fitiavana ny Fiainanao!
Last nohavaozina: Jan. 17 2021 | 2 min namaky
Foana isika rehetra, na subconsciously na hainareo ny, no handrandraiko ho ny iray. Izany olona izay afaka mizara ny fiainantsika miaraka ary iza no hanakana antsika miaritra ny hiafaran'ireo velona ao amin'ny fisaka amin'ny Fluffy ny saka. Ireto misy fomba dimy fotsiny mba tsy izany lahatra sy ny fananana tsy hita isa saka be ny sakafo mba handoavana ny!
Ve A Night Kilasy
Tombontsoa iombonana no fanalahidy eto. Na dia sary na famoronana asa soratra, ny hifidy ny alina kilasy izay incorporates ny mahaliana. Fahalalana dia zavatra lehibe rehefa hahita soulmate. Tsy maintsy mahazo ny tsirairay izay no antony mahafinaritra maro karazana gravitate mankany samy izy sy tony eccentrics maro samy hafa mankany gravitate. Koa raha misafidy ny alina ianao kilasy izay liana amin'ny izany dia mampitombo ny mety izay fa hahita olona tahaka ny tenanao.
Trano fisotroana / Clubs
Amin'ny ankapobeny ny olona tsy hiakatra tsirairay ao amin'ny trano fisotroana sy langilangy toy ny be ankehitriny satria matahotra ny olona mety hieritreritra izy ireo na mikisaka na zavatra. Fa izy ireo dia mbola mametraka ny fitiavana izay afaka hamony. Toy ny zava-pisotro tsy mikoriana ny olona mirona mba matahotra ny antsasaky ny zavatra be dia be ny olona mieritreritra azy ireo, na manahy be momba izay holazaina ka amin 'izany izy ireo lafiny mbola hihaona toerana be olona. Mazava ho azy fa tsy manoro hevitra aho, mandeha an-trano izy ireo tamin'iny alina iny, fa hitondra ny isany. Mety ho ny fanombohan'ny zavatra.
Ny asa dia izay ny ankamaroan'ny olona mahita ny fitiavana ny fiainana mankaleo ho tianao hohanina. Ka miezaka ny ho any amin'ny asa tianao raha afaka ary misy vintana be dia tsindrio ny olona iray tianao. Ary raha saro-kenatra ianao manodidina azy, aza manahy. Raha alaina hitranga, Ho hitranga izany. Fa raha tsy izany, misy be kokoa ny trondro any an-dranomasina rehefa hoe.
Ny faritra gigging dia mahafinaritra noho izy ireo ny olona. Tahaka ny faritra bar ihany fa afaka handrava ny ranomandry amin'ny hoe zavatra toy, “Tiako fa ianao Riff nilalao.” Izy io dia tena mora ny fomba hitsena ny iray sy ny maro namana teny an-dalana koa izany mianatra zava-maneno, raha tsy efa milalao iray, ary mialà tao, ary hanao sasany gigs.
Aza Hiseho Kivy
Efa voatanisa fomba efatra hihaona olona iray fa ny farany angamba no zava-dehibe indrindra. Manana mba hahazoana antoka fa tsy ho manerana tahaka ny loha laharana nahita olona no hamita azy. Ho azo antoka fa efa be dia be mitranga eo amin'ny fiainanao, ary ny olona iray nihaona ampahany iray ihany ny asa fitoriana, Tsy ny asa fitoriana manontolo. Amin'ny teny hafa ianao mba hampisehoana fa ianareo no mahery ampy miara-miaina amin'ny Fluffy any amin'ny lemaka na dia tsy amin'ny fomba an-tsaina indrindra ny ho avy. Toa matoky eo amin 'ny hoditra. Tsy misy na inona na inona manintona kokoa.
Iza no Tokony Handoa amin'ny Date Voalohany – Torohevitra Men
Common efatra Relationship zava-manahirana
7 Tokony ho Fantatrao zavatra Alohan'ny Mampiaraka ny Foodie